विद्युत्को हव भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै गर्दा विद्युत् गएपछि हेर्नुस् के भयो ? - Arthatantra.com
विद्युत्को हव भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दै गर्दा विद्युत् गएपछि हेर्नुस् के भयो ?
पर्वत। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही दिनअघि पर्वत जिल्लालगायत धौलागिरि अञ्चल नै विद्युत्भार कटौतीमुक्त घोषणा गरेको थियो । तर बिहीबार भने विद्युत्भार कटौतीमुक्त पर्वत जिल्लामा प्रधानमन्त्रीले महोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा नै विद्युत् आपूर्ति बन्द हुन पुग्यो ।
पाँचौँ पर्वत महोत्सवको उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गरिरहँदा अकस्मात विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको हो । विद्युत् आपूर्ति पनि त्यतिबेला बन्द भयो जतिबेला प्रधानमन्त्रीले पर्वत र सम्पूर्ण धौलागिरिलाई विद्युत्को हव भएको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका थिए ।
उनले कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको काम भइरहेको र यस क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना बनिरहेको बताइरहेका थिए । केहीबेर विद्युत् आउने प्रतीक्षामा उभिरहेका प्रधानमन्त्री विद्युत् नआएपछि सोफामा बस्न पुगे ।
करिब सात मिनेटपछि जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य दिएका थिए । विद्युत् सञ्चालन नहुँदा आयोजक र सुरक्षाकर्मीका बीचमा दौडादौड नै चलेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पर्वत वितरण केन्द्रका प्रमुख विजयराज रेग्मीले केन्द्रीय तहबाट नै सिस्टम आउट भएकाले विद्युत् आपूर्ति बन्द हुन पुगेको बताए । अवरुद्ध विद्युत् सेवा भने प्रधानमन्त्री काठमाडौ फर्केको झन्डै डेढ घन्टापछि सञ्चालनमा आएको थियो ।
प्रकाशित मितिः २०७३ माघ १४
वि.सं.२०७३ माघ १४ शुक्रवार १५:३८ मा प्रकाशित
अघिल्लाे NRA releases Rs 11.75b for second tranche of aid
पछिल्लाे भिडेगाराइः सीमा पर्खाल बारे कुनै वार्ता गरिन्न !